porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် (2011) ကြီးထွားလာနေသောပြဿနာတစ်ရပ်
, နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုမှန်ကန်မိတ်ဖက်များကဖွင့်ခံရဖို့အသုံးပြုသူများကိုနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်၏ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်ငယ်ရွယ်ကျန်းမာအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းတဲ့ကြီးထွားလာအရေအတွက်နှင့် နှေးကွေးစိုက်ထူ။
အသက် ၂၀ ကျော်သူများ၊ ယောက်ျားများသည်မိန်းကလေးတ ဦး နှင့် ထပ်မံ၍ မရနိုင်တော့ပါ၊ သူတို့အားလုံးသည်ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းသောအလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ယောက်ျားများသည်သူငယ်ချင်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မည်သည့်အခါမျှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်မည်ကိုကြောက်။ မည်သည့်အခါမျှပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်တစ်စုံတစ် ဦး ကသူတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဖိုရမ်တစ်ခုတွင်ပြောပြီး၊ တူညီသောအရာနှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်အခြားယောက်ျားများထံမှတုံ့ပြန်ချက် ၅၀ မှ ၁၀၀ ရှိသောအခါ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။
ဤပြဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း Threads ကအနည်းဆုံးနှစ်ဆယ်နိုင်ငံများရှိ, ကာယဗလ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီများနှင့်ကောက်-up, အနုပညာရှင်ဖိုရမ်များပေါ်မှာရှိသမျှသော web ကျော်တက်လာကြသည်။ ကနေအသိပေးစာ တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောဖိုရမ်:
ကြောင့်ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစွဲနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရည်မှတ်ရရှိထားလွှမ်းမိုးသောအီးမေးလ်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုမှကျနော်တို့အနေနဲ့လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောချည်ကိုဖန်တီးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ED အထူးသဖြင့်လူပျိုတို့အဘို့, လျှင်မြန်စွာဘုံဖြစ်လာနေသည်။
ပညာရေး၊ ဘာသာရေး၊ စိတ်ထား၊ တန်ဖိုးထားမှု၊ အစားအစာ၊ ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနှင့်စရိုက်မျိုးစုံရှိသောယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးမှစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသောလူငယ်များသည်အကူအညီတောင်းခံကြသည်။ ၎င်းတို့တွင်တူညီသောအရာနှစ်ခုရှိသည် - ယနေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပိုမိုအစွန်းရောက်သောပစ္စည်းများပိုမိုလိုအပ်လာခြင်း။
များစွာသောသူတို့သည်ယခင်ကဆရာဝန်များထံသွားရောက်ခဲ့ကြပြီးစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးခံကြရသည်။ သူတို့ရောသူတို့၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကလည်းညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အကြောင်းရင်းအဖြစ်မယူမှတ်ကြပါ။ အများစုက“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းက erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူး” ဟုစိတ်ချကြသည်။ နောက်ဆုံးရောဂါသည်ယေဘုယျအားဖြင့်“ စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်စိတ်” ဖြစ်သည်။
စိုးရိမ်စိတ်တကယ် Is စေ? ဤတွင်ရိုးရှင်းသောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားပါ။ သင်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းသင်ကဲ့သို့တူညီသောမြန်နှုန်းနှင့်ဖိအားကိုသုံးပါ။ သင်၏လိင်တံသည် porn မပါဘဲဘယ်လောက်စိုက်ထူထားသလဲ။ သင်၏လိင်တံကိုအပြည့်အဝမတည်ဆောက်နိုင်လျှင်သို့မဟုတ်စိုက်ထူရန်အားထုတ်မှုလိုအပ်ပါကစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းသည်သင်၏ပြproblemsနာများ၏ရင်းမြစ်မဟုတ်သောအခွင့်အလမ်းများဖြစ်သည်။ မြဲစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများဆက်ဆက်နိုင်ပါတယ် ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ သို့သော်စိုးရိမ်စိတ်။ သူကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲသုံးလအောက်ပါပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီးနောက်အဖြစ်တယောက်သောသူက,
မကွာလွန်ခဲ့တဲ့, အီတလီဆီးရောဂါပါရဂူမှတဆင့်အနေနဲ့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု-porn အသုံးပြုမှုကွန်နက်ရှင်ကိုအတည်ပြု ကြီးမားတဲ့စစ်တမ်း။ စစ်တမ်းနှင့် ပတ်သက်. တွေ့ဆုံမေးမြန်းတဲ့အခါ, ဆီးရောဂါပါရဂူ Carlo Foresta (အီတလီ Andrology ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ၏ဦးခေါင်းနှင့် Padua တက္ကသိုလ်မှပါမောက္ခ) သည်သူ၏ဆေးခန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများအတွက်ကုသလုလင် 70 ရာခိုင်နှုန်းကိုအကြီးအကျယ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးခဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ (Foresta ပုံယခုရှိပါတယ် လေ့လာမှုတစ်ခုကောက်ယူ.)
အီတလီတစ်ဦးတည်းမဟုတ်ပါ။ အခြားဆေးကုသမှု profesionals porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတီထွင်ကြသူအားရစရာငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့လူတို့သညျအစရှိပါသည်:
အလွန်အကျွံ Porning? ရောဘတ် Taibbi, LCSW အားဖြင့်
ဆီးရောဂါပါရဂူ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလူပျိုတို့အဘို့အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
Porn ED အားထောက်ကူပါသလား?
လေ့လာမှု porn စွဲ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုကမ္ဘာကဖျောထုတျ
porn ကိုအစဉ်အမြဲငါ့ကိုအတိုင်ခဲ့သလား (Salon.com)
Recovery ကို 6-12 ရက်သတ္တပတ်ယူပုံနှင့်တဦးတည်းအချက်ပေါ်တွင်အဓိကကျိန်းဝပ်: အင်တာနက်ကို erotica များ၏အစွန်းရောက်ဆွရှောင်ရှား။ (အတော်များများလည်းဖြစ်စေ, တစ်ဦးသည်အချိန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုရှောင်ရှားသောကြောင့်, ပထမဦးဆုံးမှာသူတို့ porn စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းမရှိဘဲ masturbate မနိုင်, ဒါမှမဟုတ်အထွတ်အထိပ် Bing ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကြောင့်အ။ )
ပြန်လည်ထူထောင်သူများအနက်တိုးတက်မှုသည်အံ့အားသင့်စရာအလားတူဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများကပုံမှန်အားဖြင့်ရက်အနည်းငယ်ပြင်းထန်သောလိင်ဆန္ဒပြင်းပြမှုများပြီးနောက်သူတို့၏လိင်စိတ်ကျဆင်းခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လိင်တံသည်“ သက်မဲ့”၊ “ ကျုံ့” သို့မဟုတ်“ အအေး” ဟုထင်ရသည်။ ဤ "Flatline" လက္ခဏာများပုံမှန်အားဖြင့်အထိတက်သည်ဆက်လက် ခြောက်ပတ်အတွင်း ပျမ်းမျှအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအသက်အရွယ်နှင့်ပြင်းထန်မှုတို့အပေါ်မှာမှီခို။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့နံနက်စိုက်ထူ, ဖြစ်ကောင်း, ရံဖန်ရံခါအလိုအလျောက်စိုက်ထူလိင်စိတ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, ပြန်လာပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ erectile ကျန်းမာရေးပြည့်စုံနာလန်ထူ, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များအတွက်လိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒလည်းမရှိ, လိင်အလွန်ပျြောမှေ့စဖြစ်လာနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုမရှိတော့ပါပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ အသက် ၁၃ နှစ်မှ စ၍ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် ၁၄ ကြိမ်မှ porn များကိုအသုံးပြုသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့၊ ငါဟာပိုမိုကြီးမားတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းတွေ၊ ပိုခက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ရုန်းကန်ရလိမ့်မည်။ လွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ဆက်ဆံရေးကိုမထိန်းသိမ်းခဲ့ပါ။ ငါ့အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းကဒီပြproblemနာပဲ။ ယခုသတင်းကောင်း။ အကြောင်းရင်းကိုသဘောပေါက်လိုက်သောအခါငါသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုချက်ချင်းစွန့်လွှတ်လိုက်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၆ ပတ်အတွင်းငါတတ်နိုင်သမျှတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်နိုင်ခဲ့သည်။ (ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးစံချိန်တင်မှာ ၉ ရက်ဖြစ်သည်။ ) အားလုံးကပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။ ငါရုံတနင်္ဂနွေများအတွက်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူသွား။ ကြောင့်အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်တောအုပ်ထဲမှထွက်နေသည်ဟုမထင်ပါ။ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများအားလုံးထံမှတော်တော်လေးစိုးရိမ်ပူပန်ရ။ ဒါပေမယ့်ငါလုပ်နိုင်တာအားလုံးကိုမင်းပြောပြချင်တယ်၊
အပတ် ၁၂၊ ၃၆ နှစ် - ငါဘယ်လောက်အထိရနိုင်သလဲဆိုတာကိုတကယ်သဘောကျတယ်။ ဒါဟာလျစ်လျူရှုရန် kinda ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကငါ့စိုက်ထူတာက Hard Rock နဲ့ Enormous တွေပါ။ ငါရှေ့မှာငါ့ရှေ့မှာသွားခဲ့တဲ့တခြားယောက်ျားတွေကိုသူတို့သတိထားမိလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှတ်မိတာကိုမှတ်မိသေးတယ်။ ကောင်းပြီ, ငါပြန်ငါ့ဥစ္စာရတယ်ထင်ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ porn ကိုဘယ်လိုပြaနာဖြစ်စေနိုင်သလဲ
အကြောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်လာသော ဇီဝကမ္မထိုကဲ့သို့သောမတူကွဲပြားသောအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းမှုတစ်ခုတည်းကိုသာပြောင်းလဲခြင်း (ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း) ကိုပြောင်းလဲသော်လည်းအလားတူပြန်လည်နာလန်ထူမှုပုံစံကိုတင်ပြသည်။ ဒီလူတွေအတွက်စိုးရိမ်တာကဒုတိယပဲ။ (မှတ်ချက် - စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာပေါ်ထွက်လာသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်အသုံးပြုသောယောက်ျားများသည်၎င်းတို့၏ erectile ကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ရယူရန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်)
လတ်တလောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသုတေသနပြုချက်အရအရက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများသည်အပျော်အပါးကို ဦး နှောက်၏ပုံမှန်တုန့်ပြန်မှုများကိုပြုလုပ်နေသောကြောင့်လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းတို့ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုဖြင့်လိင်စိတ်ကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်ကျော်လွှားခြင်းသည်အသုံးပြုသူအားအာရုံကြောဓာတုဗေဒပညာရှင်အားတုံ့ပြန်မှုကိုအထင်သေးစေသည်။ dopamine.
Dopamine သည်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ဒါဟာဆုလာဘ်များအတွက်ရှာဖွေရေးမောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော၊ ၀ တ္ထု၊ အံ့သြစရာ၊ သို့မဟုတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်စေသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့ဝင်တိုင်းအချိန်တိုင်း၎င်းကိုအနည်းငယ်သာစွမ်းဆောင်နိုင်သည်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များက dopamine အချက်ပြမှုကနေလိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်စိုက်ထူမှုနှစ်ခုလုံးပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် dopamine ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံကြောဆဲလ်များမှအကျိုးကျေးဇူးများအရဆုချသောနေရာ၌ hypothalamus ၏လိင် (libido) စင်တာများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျောရိုးရှိစိုက်ထူစင်တာများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်ကိုလိင်တံနှင့်၎င်း၏သွေးကြောများထဲသို့ထုတ်လွှတ်ပေးသည့်အာရုံကြောများမှပုံမှန်စီးဆင်းမှုသည်ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
အလှည့်ထဲမှာနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်တို့၏အသွေးတန်ဆာကို dilator cGMP, engorgement နှင့်စိုက်ထူများအတွက် on / off ခလုတ်လှုံ့ဆော်။ ပို cGMP ပိုမိုတာရှည်ခံသည့်စိုက်ထူရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိုက်ထူဖို့ဦးနှောက်ကနေလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်:
Reward circuitry (dopamine)> hypothalamus> ကျောရိုး> အာရုံကြော> လိင်တံ
dreamin နှင့်စတင်ခဲ့ပြီး cGMP ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ လိင်မှုကိစ္စတိုးမြှင့်ဆေးများ cGMP ပျက်ပြားခြင်းကိုတားဆီးပေးခြင်းဖြင့်လိင်တံတွင်စုဆောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ လူနာ၏ ဦး နှောက်သည်အချက်ပြမှုအလုံအလောက်မထုတ်ပေးပါက ED ဆေးများသည် (တစ်ခါတစ်ရံ) စိုက်ထူမှုဖြစ်ပေါ်လျှင်တောင်မှ ED ဆေးများသည် libido သို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးပွားစေမည်မဟုတ်ပါ။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်စိုက်ထူသည့်ဆေးများသည်အနည်းငယ်သာလုပ်သော်လည်း၊ တခါတရံတွင်ထုထည်ကိုထိုးဖောက်ရန်သို့မဟုတ်ရရှိရန်လုံလောက်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ ED သည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါဘယ်တော့မှမခံစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှခံစားချက်ကောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ ငါအရှိဆုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရလျှင်, ငါ့အလိုရှိသမျှ sensitivity ကို။
အသက်အရွယ်-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု, နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအခြေအနေများသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါ၏ဖြစ်ရပ်မှာမူလတန်းအားနည်း link ကိုအာရုံကြော, သွေးကြောနှင့်လိင်တံဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ သို့သော်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားအဘို့, အားနည်း link ကိုလိင်တံ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲဦးနှောက်ထဲမှာ desensitized dopamine သည့်စနစ်မဟုတ်ပါဘူး။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းဆေးစွဲသူများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအရ dopamine လှုံ့ဆော်မှုများလွန်းခြင်းသည်ဝိရောဓိအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဦး နှောက်က dopamine အချက်ပြမှု (desensitization) ကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုလျော့ချပေးတယ်။ ဤသည်ဓာတုနှင့်သဘာဝနှစ် ဦး စလုံး, စွဲအားလုံးနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများတွင် dopamine တုံ့ပြန်မှုသည်အလွန်နည်းပါးသဖြင့်အင်တာနက်မှတဆင့် dopamine အဆက်မပြတ်ထိမှန်ခြင်းမရှိဘဲစိုက်ထူခြင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။
ထူးဆန်းသောစကားများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများသည်ကြာမြင့်စွာကတည်းကရှိခဲ့သော်လည်းအင်တာနက်သည်အဆုံးမဲ့အဆုံးသတ် dopamine spikes များကိုဖြစ်နိုင်စေသည်။ ယနေ့သုံးစွဲသူများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြတင်းပေါက်များစွာမှကြည့်ရှုခြင်း၊ အပြီးသတ်ရှာဖွေခြင်း၊ အဆောတလျင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ လိင်ချက်တင်စကားပြောခြင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ အမြဲတမ်းအသစ်အဆန်းကိုကြည့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းအမျိုးအစားများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု - ထုတ်လုပ်ပစ္စည်းမှမြင့်တက်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ရယူအသုံးပြုနိုင်သည်၊ စက္ကန့်ပိုင်း၊ တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင် ၇ ရက်။ ဦး နှောက်ထဲရှိဆုချစက်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းသည်အလွန်မှန်ကန်သောဖြစ်နိုင်ချေတစ်ခုဖြစ်သည်။
အမျိုးသားအများစုသည်သူတို့၏ ဦး နှောက်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုသည်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်ကျဆင်းနေသည်ကိုမသိသောကြောင့်အင်တာနက် Erotica သည်မရေမတွက်နိုင်သော dopamine ထိခိုက်မှုများကိုပေးသောကြောင့်ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှုများမလုပ်နိုင်သည့်နေရာတွင်စိုက်ထူခြင်းနှင့်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်အမှန်တကယ်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားသော်လည်းမရသောအခါသူတို့သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရှိသည်။
ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများသည်ညစ်ညမ်းသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲခြင်းဖြစ်စဉ်များမှဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူတို့တွင် ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်တုံ့ပြန်မှုကိုရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းသည်အတော်လေးခက်ခဲနိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းသောခေတ္တခဏကျဆင်းခြင်းအပြင်အချို့သောအမျိုးသားများသည်အိပ်မပျော်ခြင်း၊ စိတ်မသက်မသာဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပြproblemsနာများနှင့်တုပ်ကွေးကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများပင်ကြုံတွေ့ရသည်။ အကြံပေးသူကောင်းတစ်ယောက်ရှာဖွေခြင်း သူကိုစွဲလမ်းနားလည်နိုင်, နှင့်အဘယ်ကြောင့်ယနေ့ porn ၏တစ် ဦး ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် Playboy မဂ္ဂဇင်း, အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်အခွင့်အရေးလိုအပ်သည်၊ ဒါကလအနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်။ porn-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနောက်ကွယ်မှသိပ္ပံပညာ၏သိပ္ပံဆရာတစ် ဦး ၏ရှင်းပြချက်အတွက်ဒီဗီဒီယိုတင်ပြချက်ကိုကြည့်ပါ။ Erectile အလုပ်မဖြစ်နှင့် Porn.
အများစုမှာယောက်ျားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်ယူဖို့အံ့ဩမိန်းမောဖြစ်ကြသည်။ အဲဒီအစား, များစွာသောနှစ်ဆယ်-တစ်ခုခုမှာ ED ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချဖြစ်လာကြပြီ သာမန်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကသူတို့ကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း၊ မည်သူကမျှယင်းတို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုမပြောကြောင်းသူတို့အံ့အားသင့်ကြသည်။ ပြီးတော့လူသားတွေဟာညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြစ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသူများအတွက်အရေးပါပုံနှင့် ပတ်သက်၍ လုံးဝမသိဘဲဖြစ်နေသည် မကြာသေးမီ စွဲသိပ္ပံပညာ၏တွေ့ရှိချက်.
သငျသညျနုပျို ED ခံစားနေရပြီး, သင်၏အာနိသင် restore ရန်ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုရင်, အကောင်းမြင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တယောက်သောသူသည်သူ၏အောင်မြင်သော Two-တစ်လစမ်းသပ်မှုအပြီးပြောခဲ့သကဲ့သို့:
1 ။ ဤသည် 100% fixable ဖြစ်ပါတယ်။
4. အကယ်၍ သင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင်အင်တာနက် porn ကိုစတင်ခဲ့လျှင်၊ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot (ED) ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်)
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကောင့်တွေ့: ငါ၏အ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုငါ၏အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမှဆက်စပ်ရှိပါသလား?
သက်သေအထောက်အထားဒီနေ့ရဲ့ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် (ED, DE, PE) အယှက်နိုငျကွောငျး mounting ဖြစ်ပါတယ်။ အလည်အပတ် porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်သော YBOP ရဲ့ပစ္စည်းအားလုံးအတှကျ။ porn-related erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေသင့်ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုစတင်ဤနိဒါန်းဆောင်းပါးကိုဖတ် - porn-သွေးဆောင် ED (PIED) ။
မှာသက်ဆိုင်ရာသုတေသနတစ်ခုအကျဉ်းချုပ် Read သုတေသနနုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်အတည်ပြုအဖြစ် 120 သတင်းဆောင်းပါးတွေမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ညစ်ညမ်းရဲ့သက်ရောက်မှု၏သတိပေးကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စောင့်ရှောက်သူများနေဖြင့် Porn-ED ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးကုသသောကျွမ်းကျင်သူများ.
ကံမကောင်းစွာပဲ, porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်၏အဝိဇ္ဇာနေဆဲဘုံဖြစ်ပါသည်။ မြင် အဘယ်အရာကိုကျွမ်းကျင်သူများက PIED ဆငျးရဲဒုက်ခကိုပြောပြပါ (အကောင်းနဲ့အဆိုး) ။
အဘယ်အရာကိုလေ့လာမှုများကော? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 27 လေ့လာမှုများ။ အဆိုပါစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံး5လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
နီးပါး 60 လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ အနည်းငယ်လေ့လာမှုများပိုကောင်း (သို့မဟုတ်ကြားနေ) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမှအမျိုးသမီးအတွက် သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုဆက်နွယ်နေကြောင်းနေစဉ်, အများဆုံး (ဒီစာရင်းကိုကြည့်ရှုကြပြီမဟုတ် - arousal အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn လေ့လာမှုများ).
ဗွီဒီယို - ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ
အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား?
Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်
Erectile အလုပ်မဖြစ်စေ Porn Tube ဆိုဒ်များဖြစ်ပါသလား